US DIYAAR U AH INUU KA GORGORTAMO BIXINTA SARREENKA UKUNTIDA BEERAHA - UKRAINE
US diyaar u ah inuu ka gorgortamo bixinta sarreenka Ukuntida Beeraha
Maraykanka ayaa diyaar u ah inuu la xaajoodo sahayda siriyalka organic ee ka soo baxda Ukraine, sida uu sheegay Wasiirka Ukraine ee siyaasadda beeraha iyo cuntada. Intii uu socday wareysiga telefishanka, wasiirku wuxuu sheegay in cunada Maraykanka ay si adag u xakameyneyso, waana ay adagtahay in suuq geli la soo saaro alaab cusub, laakiin Maraykanku wuxuu diyaar u yahay in uu la xaajoodo sarreenka organic. Wasiirka ayaa xusay in ay qaadato wakhti ay ku beddesho dhulkii beeraha, taas oo aan dhibaato ku ahayn dalka Ukraine, maadaama dhulka aan la nadiifin.
Iyadoo la tixraacayo ogeysiisyo hore, wasiirku wuxuu sii waday in uu xooga saaro in, inkasta oo Ukraine ay hadda soo saartey oo dhoofisay tiro yar oo ah badeeco organic ah marka la barbar dhigo suuqa addunka ah, mustaqbalka suuqa Sucuudiga ah ee Ukraine waa mid aad u balanqaad ah. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Beeraha ee Ukraine, Ukraine ayaa hadda kor u qaadaysa alaabta ku dhowaad 400,000 hektar dhul beereed ah iyo 80% oo ah walxaha dabiiciga ah ayaa la dhoofiyaa.